ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး-ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ချောင်းဆုံ(၁) မဲဆန္ဒနယ်မြေကိုယ်စားလှယ်လောင်း > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး / ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ / ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး-ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ချောင်းဆုံ(၁) မဲဆန္ဒနယ်မြေကိုယ်စားလှယ်လောင်း
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ August 28, 2015 ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး Leaveacomment 319 Views
ဖြေ- အဓိက က လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးရဲ့အခင်းအကျင်းမှာ လူထုကိုယ်စားပြုမှုက တအား အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ ဒီတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ဒေသရဲ့အကျိုးကို ကိုယ်စားပြု
နိုင်စွမ်းက ဒီ လွှတ်တော်ရဲ့ အခင်းအကျင်းက တော်တော်အရေးကြီးတယ်။
အဲ့တော့ တကယ်လို့သာ ကျွန်တော်တို့ သမန်ကာလျှံကာ နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားဘူး ဖြစ်ချင်တဲ့ လူ ဖြစ်သွား၊ ရွေးချင်တဲ့သူ ရွေးသွားကြဆိုတဲ့ သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဥပက္ခာပြုနေလို့ရှိရင် စိတ် ဓါတ်ရေးရာအရ စေတနာထားရှိမှုအရ ပြည်သူလူထု မဲဆန္ဒနယ် လူထုအပေါ်တကယ် စေတနာ အပြည့်အဝ ပေးနိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အားနည်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် လွှတ်တော်ရဲ့ ကိုယ စားပြုမှု ကိုယ့်နယ်အတွက် အများကြီးအားနည်းလာနိုင်တယ်။ ဒီလိုအချိန်အခြေအနေမျိုးမှာ အထူးအားဖြင့် တိုင်းရင်းလူမျိုးဖြစ်နေတယ်။ မွန်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးဖြစ်တဲ့အလျောက် ကိုယ့်ဒေသမှာလည်း မွန်အများစု နေထိုင်တဲ့ ဒေသဖြစ်တဲ့အလျောက် တခြားပါတီတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ ့ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုရဲ ့စိတ်ဆန္ဒ လိုအပ်ချက်ကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖြည့်နိုင် စွမ်းရှိမယ်မထင်ဘူး၊ ပြီးတော့ သူတို့အနေနဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားအရေးကို ကိုယ်စားပြုပြီး ပြောနိုင် ဖြေရှင်းနိုင် လုပ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က မယုံဘူး။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်ရဲ ့ယုံကြည်ချက်အရ ကိုယ်လူမျိုး ကိုယ်ဒေသခံ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသားရဲ့အရေး ကို ကိုယ်သာ လုပ်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ကိုယ့်အတွက် ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝနဲ့လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီ ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော် ဒီရွေးကောက်ခံမယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
ဖြေ-ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခံမယ့်နေရာသည် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ပြည်နယ်အတွင်းမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြဌာန်းထားတဲ့ ဒီအခြေခံဥပဒေ အရ ပြဌာန်းထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်သွားရမှာပေါ့။
အဲ့တော့ ဆိုလိုတာက ပထမဦးဆုံး တစ်အချက် ကျွန်တော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲ နိုင်တာနဲ့ ဒီလွှတ်တော်ထဲမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်၊ အဲဒီတော့ သာမန် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဥပဒေပြဌာန်းပိုင်ခွင့် ဇယား(၂)ပါ ကိစ္စရပ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ပြဌာန်းမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ ဥပဒေမှုအပြင် ပြဌာန်းပြီးတဲ့ ဥပဒေတွေကို ဘယ်အစိုးရ ဘက်က အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စွမ်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ဒီအစိုးရရဲ ့ဝန်ဆောင်မှု ပြည်သူ လူထုအပေါ် ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လောက် အားနည်းချွတ်ချောနေသလဲ အဲ့ဒီအပြင်ကို ဒီအစိုးရရဲ ့ကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှု လမ်းကြောင်းနဲ့ သွေဖီနေတဲ့ ဒီရှေ့ဆက်လှျောက်မယ့် မူဝါဒ နဲ့ ဘယ်လောက် လွဲချော်နေသလဲ၊ အဲ့ဒီဟာတွေကို အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းနေမှုအရ လူထုအပေါ် ကိုအကျိုးပြုမယ့် လူထုကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရပ်တည်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားပါ့မယ်။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ သာမန်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ လွှတ်တော်ထဲရောက်လို့ ရွေးချယ်ခံရပြီး လွှတ်တော်ရေးရာဥက္ကဌဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်ရင် လွှတ်တော် ဥက္ကဌ တို့၊ ဒုဥက္ကဌတို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီထက် တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့နေရာလည်း ရလာနိုင်ကောင်း ရလာနိုင်တယ်။ အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ထက်ပြီးတော့ မှျော်လင့်လို့ရတာ ကျွန်တော်တို့သည် အစိုးရဖွဲ့တဲ့ အခါကျရင် အစိုးရဝန်ကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်၊ဝန်ကြီး ဆိုတဲ့ အရာတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အဲ့သလို ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒေသခံတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့် အတွင်းက လုပ်လို့ရတာ အကုန်မှန်သမှျပေါ့နော်။ ကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး လမ်း ကြောင်းလည်း ဖြစ်လာအောင် ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်။ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်ပြုထားပေးတဲ့ ပြည်နယ် ရဲ့ ုလုပ်ပိုင်ခွင့် ဥပဒေပြုခွင့်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အစွမ်းကုန်လုပ်မယ် ။ဒေသခံဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စလည်း လုပ်မယ်။ နောက် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေ၊ မွန်ပြည်သူလူထုရဲ ့လိုလားချက် စာပေယဉ် ကျေးမှုတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်ပေးသွားပါ့မယ်။
မေး-တကယ်လို့ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံရပြီးဆိုပါက တကယ်ဘဲ မွန်လူမျိုးတွေနဲ့ မွန်ပြည်နယ်သားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါသလား?
ဖြေ-ယုံကြည်တယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနည်းဆုံး ပထမ (၅)နှစ်တာ ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံလည်းရှိနေပြီး။ သာမန် ဒီလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ လူတွေထပ်စာရင် ကျွန်တော်တို့က (၅)နှစ်တာ လွှတ်တော် နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံကတော့ ကောင်းကောင်းရထားပြီးပြီ။ အဲ့ဒီရထားပြီးတော့ အပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ပြီးခဲ့ တဲ့ ဒီ(၅)နှစ်တာအတွင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလည်း အများကြီးလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ လမ်းတွေ၊ တံတားတွေ၊ နောက် လှျပ်စစ်မီး သွယ်တန်းရေးတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ ဘီလူးကျွန်းဆိုရင်လည်း တံတားကြီး ဖြစ်ပေါ်အောင် တောင်းဆိုပေးတာတွေ ကျွန်တော်တို့အများကြီး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီပြည်နယ်မှာ ကျောင်းချိန်အတွင်းမှာလည်း မွန်စာပေ သင်ကြားခွင့်ရအောင် ဒါတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ လွှတ်တော်အတွင်းကနေ အစွမ်းကုန် ဆွေးနွေးတင်ပြပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ အခု အကောင်အထည်ဖော်နေပြီးဖြစ်တယ်။
ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ အတွေ့အကြုံရှိနေပြီးသာဘဲ။ အဲ့တော့ အတွေ့အ ကြုံရှိနေပြီးသား ကိစ္စကို ထပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့တောင် အားကောင်းမယ်။ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်အပြည့်အဝ ယုံကြည်တယ်။
မေး-အခု ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံမယ့် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဘာတွေ လိုအပ်နေ တယ်လို့ အန်ကယ်အနေနဲ့ မြင်ပါသလဲ?
ဖြေ-ဟုတ်ကဲ့။ အဓိကအနေဖြင့် အခု ကျွန်တော်အရွေးချယ်ခံမယ့်နေရာက ကျွန်တော်ရဲ့ မူလ မွေးဇာတိလည်းဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီမတိုင်ခင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ကတည်းကပေါ့ ကျွန်တော်ရဲ ့ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေး လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော် မရောက်ဘူးတဲ့ရွာ၊ မစားဘူးတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း ထမင်းဆိုတာ မရှိသလောက်ဘဲ။ ဆိုလိုတာကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ နယ်ပယ်အကြောင်း နှံနှံစပ်စပ် ဂဃဏန အကုန်သိတယ်။ ပြည်သူလူထု တစ်ရွာခြင်း တစ်ရပ်ကွက်ခြင်း၊ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ခြင်း၊ အားလုံးရဲ့ လိုလားချက် သူတို့ရဲ ့တစ်ရွာချင်း စိတ်ဆန္ဒ အပြုအမူအနေအထိုင် အကုန်လုံး ကျွန်တော် တိတိကျကျ သိထားတယ်။
ကျွန်တော်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကုန်လုံး န့ှံန့ှံစပ်စပ် သိထားတယ်။ သိတဲ့အလျောက်လည်း ကျွန်တော် ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံခဲ့ရတာ ၂၀၁၀ ကတစ်ကြိမ်က ဖြစ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်နဲ့လည်း ဒီ(၅)နှစ်မှာ ပြည်သူလူထု တော်တော်များများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်နယ်မြေနဲ့ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော် န့ှံန့ှံစပ်စပ်သိတယ်လို့ ကျွန်တော် အခိုင် အမာပြောရဲပါတယ်။
မေး-ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုအပ်နေတယ်လို့ ထင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက် အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရပါက ဘယ်ကိစ္စရပ်ကို ပထမဆုံး ဦးစားပေး လုပ်ဆောင် ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ စဉ်းစားထားပါသလဲ ခင်ဗျာ?
ဖြေ-အဓိကက ကျွန်တော်ရဲ့ဘီလူးကျွန်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ ဘီလူးကျွန်းကို အကြီးအကျယ် စိန်ခေါ်လာမယ့် ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကို အနှောက်အယှက်ပေးလာမယ့် လုပ်ရပ်တွေ လည်းရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လူမှုရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ အဲ့တော့ ပထမဦးဆုံး တစ်ချက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေလုပ်ပေးလို့ရသလဲဆိုတော့ အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားဒေသမှာ မွန်စာပေသင်ကြားခွင့်တွေ များများရလာအောင် ကျွန်တော် တို့ ဆက်လုပ်မယ်။ ဒါကို ကျွန်တော် ပထမ ဦးစားပေးအနေနဲ့ ကျွန်တော် ဆက်လုပ်မယ်။
အဲ့ဒီအပြင်ကို ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေဘဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျွန်တော်နယ်မှာလည်း ကရင်တွေ လည်းရှိတယ်။ အဲ့တော့ သူတို့ရဲ့ စာပေ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း ရအောင် ကျွန်တော် ဆက်လုပ်ပေးမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘီလူးကျွန်းကို ထိခိုက်လာနိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေက ဒီသံလွင်ရေကာတာ တည်ဆောက်မယ့် ကိစ္စတွေက ဘီလူးကျွန်းကို အကြီးအကျယ် ထိခိုက် လာနိုင်တယ်။ဒါကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ လူထုဘက်ကနေ ရပ်တည်ပြီးတော့ ဆက်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဖို့ တောင်းဆိုသွားမယ်။ ဒါကြောင့် ဖွ့ံဖြိုးရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ကျွန်တော် ဒုတိယ ဦးစားပေးလုပ်သွားပါ့မယ်။
တတိယအနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုမှာ မွန်းကြပ်နေရတဲ့ ဒီရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စကတော့ ဌာနဆိုင်ရာတွေရဲ ့ဝန်ဆောင်မှု အားနည်းတဲ့ပြဿနာဘဲပေါ့။ အဓိကတော့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာကို သွားတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေ၊ သူတို့ရဲ့ အကျိုးဆောင်မှုတွေ မပီပြင်သေတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ပီပြင်လာအောင် သူတို့ဝန်ဆောင်မှုတွေ ကောင်းလာအောင် လူထုအပေါ်မှာ ဖိစီးမှုတွေ မဖြစ်လာအောင် စတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုလည်း ကျွန်တော် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါ့မယ်။
မေး-နောက်တစ်ခုက မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေထဲကနေ ဘယ်အရာတွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်ပေး သွားဖို့ရှိပါသလဲ?
ဖြေ-မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပိုင်ခွင့် အတွင်းကနေ ဒီပြည်နယ်ရဲ ့လိုအပ်ချက်ကို ပြန်ပြီးတော့ သုံးသပ်ကြည့်ရရင် (၁)အချက် ကျွန်တော်တို့က စီးပွားရေးကိစ္စဘဲ နောက်ကျတော့ ကျွန်တော်တို့ မွန်ပြည်နယ်က ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား တော်တော်များတယ်။ လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းက နည်းတယ်။
ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့ဆီမှာရှိနေတဲ့ သံယဇာတတွေကို မှီခိုပြီးတော့ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းတွေ ယှဉ်တွဲပြီး လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ အင်မတန်နည်းတဲ့အတွက် ရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေ အင်မတန်များတယ်။ အဲ့တော့ ဒီဟာတွေကို ကျွန်တော်တို့က ကိုယ့်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်း အလုပ်အကိုင်တွေ များလာအောင် ဒီဟာတွေကို ကျွန်တော်တို့ စီမံခန့် ခွဲဖို့တော့ လိုတယ်။ ဒါက မွန်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံးအတွက် ခြုံပြီးပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဒီစီးပွားရေးထဲမှာဘဲ ခဏက ရှိရင်းစွဲ သယံဇာတတွေကို ပိုပြီးတော့ ထုတ်လုပ်မှုပိုင်း အောင်မြင်ဖို့ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်မှာ အဓိက ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဆန်စျေးကွက် မကောင်းတာ၊ စပါးစျေးကွက်မကောင်းတာ၊ နောက်ပြီးတော့ ရာဘာစျေးကွက်မကောင်းတာ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ မွန်ပြည်နယ်ရဲ ့သံယဇာတကို အကြီးအကျယ် ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီဟာကို ဒီစပါးစျေးကွက်တွေ၊ ဆန်စျေးကွက်တွေ၊ ရာဘာစျေးကွက်တွေ ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ပိုပြီးတော့ အားကောင်း လာအောင် ကျွန်တော်တို့က ဆက်လုပ်သွားပါ့မယ်။
မေး-မွန်လူမျိုးတွေအတွက်ကော ဘာတွေလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ စဉ်းစားထားပါ သလဲ?
ဖြေ-ကျွန်တော်တို့ မွန်ပြည်နယ်ရဲ ့လူမှုရေး ခြိမ်းခြောက်မှုကတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကြောင့် ဖြစ်နေတဲ့ လူမှုရေး ပြဿနာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါတွေက ဘာလဲ ဆိုတော့ ဒီရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကြောင့် ပြန်လာတဲ့အခါကျရင် ကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်ပွားမှု၊ ဒီကိစ္စတွေလည်း အစိုးရဘက်က ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူး၊ အခုချိန်ထိ နောက်ပြီးတော့ မှတ်တမ်း မှတ်ရာတွေ၊ စစ်တမ်းတွေ ကောက်ယူရာတွေလည်း ဒီကနေ့အထိ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးဘူး။
ဒီအကျိုးအဆက်အနေနဲ့ အိမ်မှာရှိနေတဲ့ ကလေးတွေ အမျိုးသမီးတွေ ပြန်ပြီးတော့ ကူးစက်တဲ့ ရော ဂါတွေဖြစ်လာတာလည်း အများကြီးဘဲ။ ဒါကို ကျွန်တော် လူမှုရေး ရှုထောင့်အမြင်နဲ့မြင်ပြီးတော့ ဆက်ပြီးတော့ လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက လူမှုရေး ပြဿနာက ဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကြောင့် ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ မလိုလားအပ်တဲ့ ပိုက်ဆံငွေရေး ကြေးရေး၊ စီးပွားရေးကိုဘဲ စောင်းပေးပြီးတော့ သူတို့ရဲ ့မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆတွေကြောင့် ကျောင်း စောစောထွက်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားသွားတာတွေ၊ ပညာရေးကို မလိုလားဘဲနဲ့စီးပွားရေးဘက် အာရုံရောက်နေတာတွေကို ကျွန််တော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံး လမ်းကြောင်းပြန်တည့်မတ်ပေးဖို့ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မွန်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာလူမျိုးက ဆယ်သိန်းရှိပါတယ်။မွန်လူမျိုးလည်း ဆယ်သိန်း၀န်း ကျင်လောက် ရှိပါတယ်။တခြား ကရင်လူမျိုးတို့၊ ပအိုဝ်းလူမျိုးများလည်း အတိုက်အလျောက်ရှိတဲ့ အတွက် လူမျိုးသုံးခု လေးခုရှိနေတဲ့ ဒီဒေသမှာ အနည်းဆုံး ဒီလူမှုရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေက အမြဲကြုံတွေ့နေရာမှာပဲ။
မဲဆန္ဒရှင်တွေကို မီဒီယာကနေ ဘာများမှာကြားလိုပါသလဲ?
မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူလူထုကို ကျွန်တော် အဓိကမှာကြားလိုတာကတော့ ဘယ်သူတွေက တကယ် စိတ်ရင်း စေတနာအမှန်နဲ့တကယ်ကို ဆောင်ရွက်ပေးနေလည်းဆိုတာကို သိအောင်လုပ် မြင်အောင် ကြည့်တတ်ဖို့ကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်တစ်ခါ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ရွေးချယ်မှုက မှားသွားရင် (၅)နှစ်တာ လုံးလုံးကို မချစ်သောလည်း အောင့်ခါနမ်းဆိုတဲ့အတိုင်းဘဲ ပေါင်းရမယ့် အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ဒီရွေးချယ်မှုက ဒီမိုကရေစီရဲ ့အနစ်သာရဟာ ပြည်သူလူထုရဲ ့ရွေးချယ်တင်မြှောက် မှုက သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုမျိုး ပြည်သူလူထုရဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်မှုကို ပေးထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေးကို လူထုကလည်း ပညာမျက်စိနဲ့အကြားအမြင် အတွေးအခေါ်၊ စိတ်ဓါတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ဉာဏ်အသိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ ရွေးချယ်တတ်ဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ ရွေးချယ်နိုင်ကြဖို့လည်း အထူးမေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားလိုပါတယ်။
အမည် – ဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦး
အလုပ်အကိုင် – ၉၈ မှ ၂၀၁၀ အထိ ဆေးကုသူ အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့၊ နောက်ပိုင်း ဗီဒီယိုနှင့်ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်၊ကွန်ပျူတာနှင့်ဗီဒီယို၊ ဓါတ်ပုံ နည်းပညာများကို သင်ကြားပေးသူ၊
ပညာအရည်အချင်း – B.V.Sင တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာဘွဲ့(ရေဆင်းတက္ကသိုလ်)
မွေးသက္ကရာဇ် – ၁၃၃၂ ခုနှစ်၊နတော်လပြည့်၊တနင်္ဂနွေနေ့
မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၁၀/မလမ(နိုင်) ၀၆၈၄၅၂
လက်ရှိ နေရပ်လိပ်စာ – မုဒွန်းရွာ၊
အဖအမည် – ဦးထိန်ဝင်း(ခ)ဦးတွတ်
ယှဉ်ပြိုင်မည့် မဲဆန္ဒနယ် – မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ချောင်းဆုံမြို့နယ်။
ကျွန်တော် ငါးနှစ်အထိ ကျွန်တော်ရဲ့ မွေးဇာတိဖြစ်တဲ့ မုဒွန်းရွာမှာ ကျောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်တန်း အရွယ်မှာတော့ မော်လမြိုင် အ.လ.က(၁)ကို ပြောင်းတယ်။အ.လ.က(၁)မှာ ကျွန်တော် ရှစ် တန်း နှစ်လောက်အထိ နေပြီးတော့ အ.လ.က(၉) အမျိုးသားကျောင်းကို ပြောင်းရွေ့ခဲ့တယ်။
ဒါနဲ့ကျွန်တော် ၈၈ မှာ ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ ၈၈ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန် တော် ခုနှစ်လပိုင်းမှာ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းထွက်တယ်။ ရှစ်လပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ၈၈ အရေး အခင်း ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ အရေးအခင်းထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ချောင်းဆုံမြို့နယ်ရဲ့ပထမဦးဆုံး ဆန္ဒစပြတဲ့ရွာ မုဒွန်းရွာဘဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြတဲ့နေ့မှာ ကျွန်တော် စင်ပေါ်ကို စပြီးတော့မှ တက်ခဲ့တဲ့ နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအရေးအခင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ဘီလူးကျွန်းမှာရှိတဲ့ ပါတီယူနစ်တွေ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပြီးတော့မှ ဖယ်ရှားတာတွေ ပါတီဝင်ကဒ်တွေ ပြန်အပ်ခိုင်းတာတွေ လုပ်ပြီးတော့ န.ဝ.တ မသိမ်းခင်အထိ ကျွန် တော်တို့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ စစ်အစိုးရက သိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် နိုင်ငံရေးလောကကနေ ခဏနားလိုက်ပါတယ်။
ပြီးတော့ စာပေယဉ်ကျေးမှုကို ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။၁၉၉၀ မှာ ရေဆင်းတက္ကသိုလ်ကို ကျွန်တော် စတက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ ရေဆင်းတက္ကသိုလ်မှာတော့ ကျွန်တော် စာပေ ယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီမှာ ဂီတ တာဝန်ခံ အပိုင်းနဲ့စာပေ အပိုင်းကို တာဝန်ခံရပါတယ်။ကျွန်တော် ၉၆ မှာ ဘွဲ့ရပါတယ်။၉၆ ပြီး တော့ ကျွန်တော် မှော်ဘီနဲ့ရွာသာကြီး ကြက်ခြံမှာ ၂ နှစ်လောက် ဆက်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
၉၈ မှာတော့ ကျွန်တော်ရွာပြန်ရောက်တယ်။၉၈ ရွာပြန်ရောက်တော့ အဲ့ဒီ စာပေ ယဉ်ကျေးမှု ကော် မတီမှာ ဒီကနေ့အထိ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ စာပေယဉ်ကျေးမှုကော်မတီမှာ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး အနေနဲ့ရော တစ်ခါတစ်လေ ဂီတ တာဝန်ခံအနေနဲ့ရော လုပ်ခဲ့ပေးပါတယ်။
၂၀၁၀ မှာ ကျွန်တော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ (AMDP)ကို ဖွဲ့ထား ပြီးတော့ (AMDP)မှာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကော်မတီဝင် ၁၅ ဦးကနေ တဆင့် ကျွန်တော်ကို မြို့နယ်က နေ အရွေးချယ်ခံဖို့ ကမ်းလှမ်းလာတာကနေ စပြီးတော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အရွေးချယ်ခံဖို့ ဖြစ်လာတာပေါ့။။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ချစ်မင်းထွန်း 2015-08-28
Previous သမ္မတနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိပ်သီးများ ရှေ့လ ၉ ရက်နေ့တွင် တွေ့ဆုံကြမည်
Next မွန်အမျိုးသားအကျိုးသယ်ပိုးမည့်ပါတီကို ထောက်ခံမဲပေးရန် NMSP တိုက်တွန်း